Calaamadaha Fibromyalgia ee Haweenka | Calaamadaha caamka ah ee fibromyalgia
7 Calaamadaha Fibromyalgia ee Haweenka
29 / 07 / 2018 /0 Comments/i fibromyalgi/av waxyeelladayda
Ogaanshaha cudurka dabadheer ee fibromyalgia ayaa sii kordhaya. fibromyalgi waa nooc ka mid ah laabotooyinka jilicsan ee jirka ku dhaca gaar ahaan dumarka.
Ma ogtahay in Superstar Lady Gaga ay leedahay fibromyalgia, tusaale ahaan? In xiddigaha caanka ah ee noocaas ah ay ka hadlaan ogaanshaha hore loogu yeeri jiray "cudurka aan la arki karin" waa wax wanaagsan sababtoo ah waxay keenaysaa dareenka aadka loogu baahan yahay koox bukaan ah oo aan la rumaysan ama la illoobin muddo dheer.
- Waa maxay sababta aan loo maqal Bukaanka Xanuunka Raaga?
Sidii aan soo sheegnay, haweenka ayaa si gaar ah u saameeya xanuunkan dabadheer ee xanuun daran. Sababta ay dumarku u saameeyaan in ka badan inta ragga ah lama hubo - laakiin kiiska waa la baarayaa. Waxaan u dagaallanaa kooxdan dadka - iyo kuwa qaba cudurrada kale ee xanuunka daba dheeraada - si ay u helaan fursado wanaagsan oo daaweyn iyo jimicsi. Haddaba waxaan kaa codsaneynaa inaad sii share gareyso qoraalkan si aad u kordhiso aqoonta bulshada dhexdeeda si aan horumar uga gaarno arrintan. Naga like saar boggayaga FB og kanaalkeena YouTube warbaahinta bulshada si ay noogu soo biirto dagaalka loogu jiro nolol maalmeedka hagaajinta kumanaan kun oo qof.
- 7-da Calaamad ee Caadiga ah
Fibromyalgia wuxuu ku dhacaa gaar ahaan haweenka ku jira kooxda da '20-30 sanadood. Markaa maqaalkan waxaan kaga hadlaynaa 7da astaamood ee ugu badan ee fibromyalgia ee dumarka.
1. Xanuun aad u daran jirka oo dhan
Fibromyalgia waxaa si gaar ah loogu sifeeyaa iyada oo ay ugu wacan tahay xanuunka astaamaha ah ee saameyn ku yeelan kara jirka oo dhan - oo qofka dareensiin kara dareemi kara inuusan weligiis nasan, inuu runtii madax adag yahay oo subaxdii daalan yahay oo nolol maalmeedka lagu yaqaan xanuun. Cilmi -baadhayaashu waxay rumaysan yihiin in arrintani ay sabab u tahay fal -celin bayoolaji ah oo loo yaqaan "dareen -wade dhexe" - taas oo macnaheedu yahay in jidhku si khaldan u tarjumayo calaamadaha nidaamka neerfaha iyo in culays la saaro oo aan caadiyan waxyeello soo gaadhin runti waxay keenaysaa calaamado xanuun
- Tallaabooyinka Is-xakamaynta ee lagu taliyay Fibromyalgia iyo Xanuunka Daba-dheeraada
(Sawirka: En derin acupressure, oo sidoo kale loo yaqaanno dhibco dhibco ah, ayaa loo isticmaali karaa in lagu nasto lagana nafiso cudurka 'myalgias'.)
Waxaa jira daawooyin lagu kabuubiyo xanuunka, laakiin nasiibdarro badankood ayaa leh liis dheer oo waxyeellooyin ah. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaad sidoo kale ku fiicantahay inaad u istcimaarto is-daryeelidda qaab socodka socod kaynta, tababarka pool biyaha kulul, isticmaalka kubadaha dhibcaha ka dhanka ah murqaha xanuunka, dabaasha iyo leylisyada dhaqdhaqaaqa laqabatimay sida hoos ka muuqata. Bukaannadayada qaba fibromyalgia, waxaan inta badan kugula talineynaa isticmaalka derin acupressure (guji halkan si aad u aragto tusaale - isku xirka wuxuu ka furmay daaqad cusub oo browser ah) si loo yareeyo loona yareeyo xiisadda muruqa.
Maaddaama inbadan oo idinka mid ahi ay ka ogaadeen muruqyada jidhka iyo kala-goysyada, fibromyalgia waxaa ku jira dhacdooyin kordha oo xanuun murqaha ah, kala-goysyada adkaanta iyo kacsanaanta dareemeyaasha Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa muuqaal jimicsi leh shan jimicsi oo jilicsan oo kaa caawin doona inaad hesho jimicsi wanaagsan, xanuun yar iyo wareegga dhiigga oo kordha.
Ku soo biir qoyskeena iyo dagaalka ka dhanka ah xanuunka daba dheeraada - ku soo biir kanaalkayaga YouTube (halkaan riix) si aad u hesho talo bixin jimicsi bilaash ah, barnaamijyo jimicsi iyo aqoon caafimaad. Ku soo dhawow!
Dad aad u tiro badan ayaa la xanuunsanaya xanuun daba dheeraada oo baabi'iya nolol maalmeedka - sababtaas awgeed ayaan kugu dhiirigelinaynaa inaad La wadaag maqaalkan warbaahinta bulshada, Xor ayaad u tahay inaad jeceshahay boggayaga Facebook oo waxaad tidhaahdaa,Haa baaritaanno badan oo lagu sameeyo fibromyalgia”. Sidan oo kale, mid ayaa ka dhigi kara astaamaha la xiriira cudurkaan mid muuqda oo la hubin karo in dad badan si dhab ah loo qaato - sidaasna lagu helo gargaarka ay u baahan yihiin. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa in feejignaanta noocan oo kale ah ay u horseedi karto maalgelin ballaaran cilmi baarista ku saabsan qiimeynta cusub iyo hababka daaweynta.
Sidoo kale aqri: - Baarayaasha waxaa laga yaabaa inay heleen sababta keentay 'Fibro fog'!
2. Fibromyalgia iyo daal (daal daran)
Kordhinta xad-dhaafka nidaamka dareemayaasha jirka iyo xanuunka, ayaa ah in jirku ku shaqeeyo qalabka sare ku dhawaad ​​XNUMX saac maalintii. Xitaa markaad hurudo. Tan macnaheedu waa in dadka qaba fibromyalgia badanaa ay soo tooso maalinta ku xigta waxayna u daalan yihiin sidii markay seexdaan.
Baarayaasha ayaa rumeysan in tani ay ugu wacan tahay dadka qaba cudurka fibromyalgia waxaa la arkay in nidaamka difaaca jirka ee xakameynaya fal-celinta bararka uu u shaqeeyo si ka duwan - iyo in muruqyada jirka aysan sidaas u helin bogsiinta iyo nasashada ay u baahan tahay. Tani waxay keentaa, dabiici ahaan ku filan, dareemida daal iyo daal.
Sidoo kale aqri: - Cilmi-baarayaashu waxay rumeysan yihiin in labadan borotiin ay baari karaan Fibromyalgia
3. Fibromyalgia iyo dhanjafka
Kuwa qaba fibromyalgia waxaa badanaa ku dhaca madax xanuun daran iyo madax -xannuun. Xaaladda waxaa badanaa loogu yeeraa "madax xanuun fibromyalgia". Ma cadda sababta keentay in dadka qaba fibromyalgia ay si is daba joog ah u saameeyaan, laakiin waxaa la rumeysan yahay inay tan u sabab tahay xad-dhaafka nidaamka neerfaha iyo sidaa darteed waxqabadka koronto ee sarreeya.
Sida la wada og yahay, waa arrin qofku inta badan ku arko “duufaannada korontada” ee cabbiraadda maskaxda kuwa qaba madax -xannuun - sidaa darteed waxaa jira sabab looga shakiyo in xasaasiyad ku timaadda habdhiska neerfaha ay sabab u tahay madax-xanuunka noocan ah.
Noocyada cilladaha qaarkood ayaa sidoo kale lala xiriiriyay sii kordheysa xanuunka dhanjafka - oo ay ku jiraan magnesium-ka elektroonigga ah - oo aan ognahay inay mas'uul ka tahay nidaaminta qaybo badan oo ka mid ah muruqyada iyo shaqada neerfaha. Waxaa caafimaad ahaan la xaqiijiyay in yaraanta magnesium-ka ay keento aasaaska muruq-jabka, murqaha muruqyada, daalka, garaaca wadnaha oo aan joogto ahayn iyo cilladaha garashada - taas oo ay ugu wacan tahay dar-darta dareemayaasha (qaadista iyo gaarsiinta dareemayaasha dareemayaasha iyada oo loo marayo dareemayaasha muruqyada iyo maskaxda) waxaa si xun u saameeyay yaraanshaha magnesium-ka.
Cunto gaar ah, deeqda Q10, fekerka, iyo sidoo kale daaweynta jireed ee muruqyada iyo muruqyada, ayaa muujisay in wadajir (ama kaligood) ay gacan ka geysan karaan yareynta dhacdooyinka iyo xoojinta madax-xanuunka noocan oo kale ah.
Sidoo kale aqri: - Warbixinta cilmi baarista: Kani waa Cunnada ugu Fiican Fibromyalgia
Guji masawirka ama isku xirka sare si aad wax badan uga ogaato cuntada ku habboon ee ku habboon kuwa qaba fibro.
4. Fibromyalgia iyo dhibaatooyinka hurdada
Dhibaatooyinka ku haya hurdada ama hurdada hore waa hurdo u dhexeeya dadka qaba fibromyalgia. Waxaa la tuhunsan yahay in tani ay sabab u tahay dhaqdhaqaaqa badan ee hab-dhiska neerfaha iyo maskaxda, taas oo macnaheedu yahay in qofka ay saameeyeen waligiis "nabadgelyo" oo dhan ah uusan ka helin jirka, iyo in xanuunka jirku uu sidoo kale keeno tayada hurdada oo saameyn weyn ku yeelata oo aad u weyn. la dhimay.
Jimicsiyada fidinta fudud, farsamooyinka neefsashada, isticmaalka waji qaboojinta maaskaro dhanjafka iyo ka fiirsashada waxay ka caawin kartaa jirka inuu hoos u dhigo kormeerkiisa si loo yareeyo jahwareerka jirka sidaas darteedna wax yar ayaa la seexanayaa.
5. Fibromyalgia iyo ceeryaanta maskaxda
Shaqada garashada oo hoos u dhacday iyo dareen ah in madaxa uusan “si buuxda ugu lug lahayn” ayaa ku badan kuwa qaba fibromyalgia. Xaaladda waxaa loo yaqaan khafiifinta xumaha - sidoo kale loo yaqaan ceeryaanta maskaxda. Calaamadaha ceeryaamo maskaxeed waxaa ka mid noqon kara xasuus-beel ku-meel-gaar ah, oo ay ku adkaato in la xasuusto magacyada iyo meelaha; ama awood guud oo daciif ah si loo xalliyo hawlaha u baahan fikir habaysan oo macquul ah.
Waxaa hadda la rumeysan yahay in khaladkan fibrotic uu sabab u yahay isbeddelka waxqabadka maskaxda ee ka dhex jira kuwa qaba fibromyalgia - dhibaato ay ugu yeedheen "qaylada dareemayaasha".
Ereygan wuxuu sharxayaa dariiqa korantada ee korantada ee baabi'iya xiriirka ka dhexeeya qaybaha maskaxda ee kaladuwan. Waxaad u malayn kartaa inay tahay faragelintan oo kale ah mid mararka qaarkood laga maqli karo idaacadaha FM-yadii hore.
Sidoo kale aqri: Tan Waa inaad Ka Ogaato Fibromyalgia
6. Fibromyalgia iyo niyad jab
Fibromyalgia iyo ogaanshaha xanuunka dabadheeraadku, ayaa la fahmi karaa, inay ku xidhan yihiin heerar sare oo ah isbeddelada niyadda, diiqadda iyo walbahaarka. Waxaa la og yahay in saameyn ku yeelashada xanuunka joogtada ah ay sidoo kale ku xiran tahay niyad-jabka iyo isbeddelka niyadda.
Cilmi baaris ayaa muujisay in gudbiyaha dareemeyaasha ee saameeya niyad jabka uu si xoogan ugu xiran yahay xanuunka. Ogaanshaha in fibromyalgia ay sababto xanuun joogto ah, xanuun ballaaran, waxaad sidoo kale arkeysaa xiriirka tooska ah ee u dhexeeya fibromyalgia iyo niyad-jabka.
Sababtan awgeed, waa muhiim inaad sidoo kale isku daydo inaad wax ka qabato qeybta maskaxda iyo maskaxda ee laxiriirta xanuunka daba dheeraada. Waxa ugu xun ee aad sameyn karto waa "ku hay", maxaa yeelay tani waxay sii adkeyn doontaa weerarada welwelka xitaa.
Ku biir ururkaaga rheumatism -ka ee deegaanka, ku biir kooxda taageerada internetka (waxaan ku talinaynaa kooxda facebook «Rheumatism iyo xanuun joogto ah - Norway: Wararka, Midnimada iyo Cilmi-baarista«) Oo u fur dadka kugu xeeran oo aad mararka qaarkood dhib ku qabtid iyo in tani si ku meel gaar ah uga gudbi karto shakhsiyaddaada.
7. Fibromyalgia iyo cillad maskaxeed
Waxaa la arkay in kuwa ay saameeyeen fibromyalgia sidoo kale badanaa waxay saameeyaan waxa aan ugu yeerno caloosha kacsan. Calaamadaha cudurka mindhicirka xanaaqa waxaa ka mid noqon kara booqashooyinka joogtada ah ee musqusha, calool xanuun iyo shuban. Laakin waxa kale oo ka mid noqon kara calool-istaag iyo dhibaato in mindhicirku bilaabo.
Qof kasta oo qaba dhibaatooyin caloosha oo joogto ah iyo calaamadaha caloosha oo xanaaq badan waa inuu baaraa takhasus caafimaad (khabiir ku-jirta). Waxa kale oo aad muhiim u ah in la qiimeeyo cuntadaada - iyo gaar ahaan in la isku dayo in loo hoggaansamo waxa loo yaqaan «cunto fibromyalgi" Nasiib darro, dhammaan hababka mindhicirku isku mid maaha; sidaas darteed qaar ayaa laga yaabaa inay saameyn wanaagsan ku yeeshaan u beddelashada cuntadan oo kale, halka kuwa kalena ay dareemayaan wax saameyn ah.
Macluumaad dheeri ah? Ku biir kooxdan weyn!
Ku biir kooxda Facebook «Rheumatism iyo Xanuunka dabadheeraad - Noorwey: Daraasad iyo warar»(Halkan guji) si aad u hesho cusboonaysiinta ugu dambeysa ee ku saabsan cilmi baarista iyo qorista warbaahinta ee ku saabsan xanuunnada daba-dheeraada. Halkan, xubnuhu sidoo kale waxay ka heli karaan caawimaad iyo taageero - wakhti kasta oo maalinta ah - iyadoo la adeegsanayo isweydaarsiga khibradahooda iyo talooyinkooda.
VIDEO: Layliyo loogu talo galay Rheumatists iyo kuwa uu ku dhacay Fibromyalgia
Xor baad utahay inaad isqorto kanaalkeena - oo raac boggayaga FB si aad u hesho talooyin caafimaad oo maalinle ah iyo barnaamijyo jimicsi.
Waxaan runtii rajeyneynaa in maqaalkani kaa caawin karo dagaalka ka dhanka ah fibromyalgia iyo xanuunka daba dheeraada.
Mar labaad, waxaan rabnaa inaan ku waydiino si fiican inaad maqaalkan kula wadaagto warbaahinta bulshada ama blogkaaga. Dareen xornimo inaad si toos ah ugu xidhidhdo maqaalka. Fahamka iyo diiradda la kordhiyo waa tallaabada ugu horreysa ee nolol maalmeedka wanaagsan kuwa qaba fibromyalgia.
Fibromyalgia waa cilad xanuun oo joogto ah oo aad u ba'an u leh qofka ay dhibaatadu saameysey. Baadhitaanku wuxuu u horseedi karaa tamar yaraan, xanuun maalinle ah iyo caqabado maalinle ah oo aad uga sarreeya wixii ay Kari iyo Ola Nordmann tabanayaan. Waxaan si naxariis leh kaaga codsaneynaa inaad jeceshahay oo aad la wadaagto tan si loo xoojiyo diiradda iyo cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan daaweynta fibromyalgia. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa qof kasta oo jecel oo wax la wadaaga - laga yaabee inaan wada joogno si aan maalin uun u helno dawo?
Ikhtiyaarka A: Toos ula wadaag FB. Koobiye ciwaanka mareegta oo ku dheji bogga facebook-ga ama kooxda facebook ee khuseeya ee aad xubinta ka tahay. Ama riix badhanka "SHARE" ee hoose si aad u wadaagto boostada Facebook-gaaga.
Xulashada B: Toos ugu xariir maqaalka bartaada.
Xulashada C: Raac oo isu dhig Boggayaga Facebook (riix halkaan haddii aad rabto)
(Raac oo faallo ka bixi haddii aad rabto inaan muuqaal u samayno xanuunkaaga)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Fibromyalgikvinne.jpg?media=1648573622 368 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2018-07-29 19:59:162022-03-18 15:29:357 Calaamadaha Fibromyalgia ee Haweenka
Cilmi Baadhis: Laba Barood Oo Wax Ka Caawin Kara Baadhista Baadhitaanka Fibromyalgia Fibromyalgia: 5 talo oo ku saabsan hurdada habeenkii oo wanaagsan